Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara emina ọkụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Spain biri izu ole na ole gara aga, ngwụsị oge opupu ihe ubi n'ezie oké ifufe wee gafere mmiri. E wezụga oké mmiri ozuzo ahụ, ihe kasị dọta mmasị ọtụtụ ndị bi na ya bụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụzarị ọkụ na mere na bụ na dị ka ukara data ha debara aha ha na- 22.000 ụzarị. Nke a emeela ka ọtụtụ ndị mmadụ chọọ ịmatakwu banyere nnukwu ihe a dị egwu ma dị egwu Ihe gbasara ihu igwe.
1 Mgbe ụzarị ọkụ ahụ malitere
2 Ugboro ole ka àmụmà nwere
3 Kedu ihe kpatara mmegha ahụ nke zig zag
Mgbe ụzarị ọkụ ahụ malitere
Rays abụghị ihe ọ bụla karịa ọkwa na-emepụta site na nnukwu ume na-agbakọ n'ígwé ojii. Ha na-apụtakarị mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị elu ma nwee oke iru mmiri na ikuku. Ha na-emekarị ke ndaeyo n'ihi na a na-ebo ikuku ọkụ ọkụ site na ịbịakwute ikuku oyi. Mgbe mmiri ozuzo na-ezo, igwe ojii na-ewepụta ike dị otú ahụ n'ụdị ụzarị.
Ugboro ole ka àmụmà nwere
Lightning nwere ike dị ukwuu nke na ọ nwere ike iru ịbụ onye efu. A na-agụta ya na ihe ọ bụla ray na-eme ihe dị ka kilomita 5 n’ogologo site na nanị 1 sentimita n’obosara, ike nke ray na-ewe pụrụ ịdị ukwuu Ijeri joules nke ike 5 nke nwere ihe ruru 200.000 amps na 100 nde volts.
Kedu ihe kpatara mmegha ahụ nke zig zag
Omume a nke ụzarị ọkụ bụ n'ihi na nnukwu ụgwọ nke mpaghara eletriki na-akpata hapụ ha ka ha kewaa ihe ndị dị mma site na ndị na-adịghị mma. Nke a ionization abụghị otu ma na-amalite imegharị ka a ga - asị na ọ bụ agwọ ma na - emepụta nke a maara nke ọma zig zag.
Enwere m olile anya na akọwachaala m ajụjụ ụfọdụ gbasara àmụ̀mà na àmụ̀mà, dị ka ọchịchọ ikpeazụ ịgwa gị nke ahụ obodo South Africa nke Johannesburg ọ bụ ebe a na-egbu ọtụtụ àmụmà kwa afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihe niile ị chọrọ ịma banyere amuma mmiri